JUBBALAND: DF Somaliya waxay nagu haysaa hanjabaad, cunsurnimo & caburin bulsho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta JUBBALAND: DF Somaliya waxay nagu haysaa hanjabaad, cunsurnimo & caburin bulsho
JUBBALAND: DF Somaliya waxay nagu haysaa hanjabaad, cunsurnimo & caburin bulsho
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Photo: Halqaran.com
Kismaayo (Halqaran.com) – Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday, in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku hayso hanjabaad iyo falal cunsurimo ah, arrimahaasina ay la kulmayaan Shaqaalaha rayidka Jubbaland.
War-saxaafadeed ka soo baxay Maamulka Jubbaland oo looga hadlay dhacdadii xayiraadii la saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa Maamulka wuxuu ku sheegay inay tahay arrin aad looga xumaado falkaasi.
Masuuliyiinta Jubbaland waxa ay sheegeen muwaadiniinta inay xaq u leeyihiin isu socodkooda oo madax banaan sida uu qabo Dastuurka Federalka ee dalka, balse aanan loo baahnayn caburinta Bulshada.
Ugu dambeyn, dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegtay in dowladda Federalka Soomaaliya ay kaga digayso ku tumashada xuquuqda aadanaha.
Halkan hoose ka akhrsi war-saxaafadeedka Jubbaland:
DHAGEYSO: Madaxweynihii hore Somaliya Xasan Sheekh ”Hoggaanka DF Somaliya sida ay wax ku wadaan sax maaha”
DHAGEYSO: Shariif Sheekh Axmed oo si kulul u weeraray Madaxda DF Somaliya, ”Farmaajo inuu sharciga ku tunto lagama aqbalayo”!
DEG DEG + DAAWO MUUQAAL: Somaliland oo Xamar dowlad cusub u dhisaysa & Feysal Cali Waraabe oo Shariif Sheekh Axmed uga tacsiyeeyay falkii uu Farmaajo kula kacay!
Hoggaamiyaha Xisbiga Mucaaradka ee Wadajir oo kabaha la dul-maray madaxda dalka Somaliya, ‘Madaxda Dastuurka ayay ku tumanayaan’!
DAAWO SAWIRRO: Al-Shabaab oo soo bandhigay weerarkii xerada Ceel-Saliini & saanado ay ka qaateen xeradaas
DAAWO MUUQAAL: Sheekh Maxamed Idiris oo si deg-deg ah isaga cararay Somaliland, kadib markii lagu amray…
Xafiiska Halqaran.com, Kismaayo
DF Somaliya waxay nagu haysaa hanjabaad